Iphepha 5 - 5 WWE Superstars ekusenokwenzeka ukuba ubungayazi ukuba isebenze ne-NJPW - Wwe
5 I-WWE Superstars mhlawumbi ubungazi ukuba isebenze ne-NJPW
# 1 uRic Flair
URic Flair uthathe inxaxheba kwitumente ye-NJPW G1 Climax ngo-1991
URic Flair ngokwenyani uyisimboli somzi mveliso we-wrestling kwaye i-WWE Hall of Famer yexesha ezimbini iya kwehla embalini njengenye yezona zinto zibalulekileyo kulo lonke ixesha.
Ngelixa wayebambe ubuNtshatsheli beNWA yeWorldweightweight ngo-1991, uRic Flair wenza ukubonakala kwakhe okokuqala kwi-NJPW. Kumdlalo wakhe wokuqala, uFlair akazange aphumelele ukukhusela isihloko ngokuchasene noTatsumi Fujinami - IWGP Heavyweight Champion - kwisihloko vs isihloko somdlalo kwiWCW / New Japan Supershow.
Kwiinyanga ezine kamva, iNdalo Inkwenkwe yenza ukubonakala kwayo okulandelayo kwi-NJPW xa yathatha inxaxheba kwitumente yeG1 Climax. I-Flair, nangona kunjalo, iphumelele u-Shiro Koshinaka kunye nomdlalo ngokuchasene noMasahiro Chono, akaphumelelanga ukuqhubela phambili kubakaki.
Ukulandela oku, iFlair yahlala ingekho kwi-NJPW malunga nonyaka okanye ngaphezulu ngaphambi kokuba ibuye kwaye ingaphumeleli ijongane noShinya Hashimoto kwi-IWGP Heavyweight Championship. Ngale lahleko, uFlair wawusonga umsebenzi wakhe we-NJPW kwaye waqhubeka esebenza neWCW de inkampani yaphela ishishini.
UFlair wenza ukubuya kwakhe xa iWWE yamnika ikhontrakthi ngo-2001. Kwimbali yakhe yokuqala, uFlair wadlala indima yokuba ngumnini we-WWE naye, waqalisa umlo noVince McMahon.
ufundisa abantu indlela yokuphatha
Imibongo malunga nomntu omthandayo oswelekileyo
banxibelelana njani amadoda nabafazi ngokwahlukileyo
Iliwa elihambelana nolawulo lwamaRoma
ungamncoma njani umfana omthandayo